MM dhimma filannoo dhufuurratti paartilee morkattotaa waliin mari'achaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa DR Abiy Ahimed yeroo paartilee mormitootaa mariisisan
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimed dursitoota paartilee morkattotaa biyya keessa turaniifi dhiyeenya waamicha taasifameefiin gara biyyaatti galan 81 ta'an waliin dhimmoota filannoo biyyaalessaa dhufuufi adeemsa dimokiraasii biyyattii cimsuurratti mari'achaa jiru.
Ministirri Muummee dursitoota paartilee morkattotaa waliin kan mari'ataa jiran jijjirama dimokiraasii biyya keessatti jalqabee jiruu fi filannoo bara dhufu gagggeefamu ifaa fi haqa qabeessa gochuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban irratti dha kan mari'ataa jiran.
Mariin kun galma waajjira Ministira Muummee keessatti gaggeeffamaa jira.
Marii kana irratti paartileen siyaasaa biyya keessatti galmaa'anii jiranii fi mootummaan waamicha taasiseefii biyya keessaa galan irratti argamaniiru.
Marichaaf yaada ka'umsaa kan kennan Ministirri Muummee mariin paartilee siyaasaa waliin itti fufinsaan gaggeessan haala akkamiin tahuu akka qabu irratti akka mari'atan eeraniiru.
Mariidhaan akkamitti waan barbaadame furuun akka danda'amu,mariin gaggeeffamu eessatti, akkamiinii fi yaadota akkamii irratti gaggeefamuu qaba kan jedhu irrattis osoo mari'atamee jedhaniiru, Ministerri Muummee.
Walumaagalatti mariin paartilee siyaasaa ifatti jalqabuu isaas kan itti ifoomsinudha jedhaniiru.
Har'a marichaan wantoota ka'anis bu'uura godhachuun Boordiin Filannoo Biyyaalessaa sagantaa mataa isaa akka baasu dubbataniiru.Filannoon gaggeeffamu maqaan kanaan dura kennamaafi ture akka hin simannes ibsuun.
Mariin kanaan dura gaggeeffamaa ture bu'aa qabeessa akka hin turre kan dubbatan Ministirri Muummee Dr Abiy Ahimed, isaanis jalqabuma yeroo mariin jalqabu yaada tokko irratti wal tahanii eegaluu dhabuun akka bu'aa gaariin hin argamneef sababa taheera jedhan.
Afrikaa irraa biyya mootummaadhaan buluun jalqaba irratti maqaan ishee kaatu taatus Itoophiyaan siyaasaan ardichaaf fakkeenya tahuu akka hin dandeenye himaniiru.
Itoophiyaan siyaasa tokko 'A' jettee jalqabuun biyya barattudha jedhan Ministirri Muummee.
Paartileen siyaasaa biyya tokkoof kan hojjetan waan taheef mari'achuu qabu kan jedhan Ministirri Muummee kan mo'atee fi kan mo'ame waliin mari'achuun akka biyyaatti itti fufsiisuuf hojjechuu qabna jedhan.
Imaammatni siyaasaa fi caasaan keenya garaagara tahus, garaagarummaa keenya biyyaa fi uummataa gadi gochuun gaddisa kana jalatti yaada waliinii qabaachuutu nuuf tahas jedhan.
Filannoon biyyaaleessa Itoophiyaa gaggeeffamuuf wagga tookkofi ji'oota muraasatu hafeera.
Marii partileen biyya bulchaa jiruufi morkattootaa gaggeeffataa jiran kana miidiyaaleen lakkoofsi isaanii hedduu ta'an (25 ol) akka gabaasaa jiranillee barameera.
Marii kana keessattis miidiyaaleen kunneen marii kana bilisaafi logii tokko malee miira itti gaafatamummaa qabuun gabaasuudhaan ijaarsa dimokiraasii keessatti walitti fufinsaan akka ga'ee isaanii bahan gaafatameera.